Habka mugdiga ah ee iOS 13 miyuu badbaadiyaa nolosha batteriga? Haa oo waa ku filan | Wararka IPhone
Habka mugdiga ah ee iOS 13 miyuu badbaadiyaa nolosha batteriga? Haa iyo wax badan
Mid ka mid ah sheekooyinka cusub ee ka yimid gacanta macruufka 13 waxaa laga helaa habka mugdiga ah, hab mugdi ah oo waligiis ka mid ahaa dalabaadka isticmaalayaasha dhowr sano, laakiin taasi wax macno ah ma sameynin ilaa iyo inta shaashadaha Apple ay ku isticmaashay iPhone-ka ay wali ahaayeen LCD.
El IPhone-kii ugu horreeyay ee hirgeliya shaashadda OLED wuxuu ahaa iPhone X. Tan iyo markaas iPhones cusub, marka laga reebo iPhone XR iyo iPhone 11, dhammaantood waxay leeyihiin shaashad OLED. Farqiga ugu weyn ee u dhexeeya LCD iyo shaashadda OLED ayaa ah kan dambe, oo keliya daar Laydhka muujinaya midab aan madow ahayn.
Taasi waa, haddii codsiyada aan isticmaalno ay na siinayaan xaalad mugdi ah oo dhab ah, ma jiraan wax mugdi ah oo mugdi ah sida codsiyada qaarkood ay bixiyaan, maahan in dhammaan LED-yada shaashadda iftiimin doonaan, laakiin kaliya kuwa muujiya midab aan madow ahayn ayaa loo isticmaalaa, taas oo waliba noo oggolaaneysa inaan ku raaxeysano madow aad u daran.
Shaashadaha LCD u iftiimi dhammaan guddiga si aad u muujiso midab kasta oo ay ku jiraan madowSidaa darteed, keydinta aan ku heli karno shaashadda OLED waligood laguma heli doono aalado leh nuuca noocan ah. Si naloo tuso waxa badbaadinaya bateriga ee qaabka mugdiga ah uu na siinayo, ragga ku jira PhoneBuff waxay sameeyeen tijaabo ah isticmaalka iPhone XS, labadaba xaalad mugdi ah iyo mid iftiin leh.
Si imtixaanka looga dhigo mid sax ah sida ugu macquulsan, labada bandhigba waxaa loo dejiyay inay muujiyaan 200 nits oo dhalaal ah, qodob kale oo si macquul ah uga qayb qaata batteriga waqti dheer ama ka yar. Sida laga soo xigtay tijaabooyinkan, iPhone XS oo leh shaashad leh qaab mugdi ah oo firfircoon Waxay na siineysaa 30% badbaadin batari.
Habka mugdiga ah aan ku habboonayn isticmaalka dharaar cad, sidaa darteed haddii aad rabto inaad keydiso batteriga, waxa ugu fiican ee aad sameyn kartid waa inaad barnaamijka ku diyaarisaa qalliinka qaabkan, si ay u hawlgasho fiidkii oo ay waabariisato waaberiga, sidaan ayaan u qaabeeyey
Intaa waxaa sii dheer, codsiyada horay u taageeray qaabkan, waa la hawlgeliyaa oo waa la joojiyaa iyadoo la raacayo qaabeynta nidaamka, markaa uma baahnid inaad ka walwasho ku shaqeysiinta iyo ka joojinta gacanta.
1 Sida loo kiciyo habka mugdiga ee iOS 13
2 Sida loo kiciyo shaqada Night Shift ee iPhone / iPad
2.1 Aalado la jaanqaadi kara shaqada Habeenkii Shift
3 Habka madow ama Habeenkii loo beddelo kee fiican?
4 Waa maxay Tone True?
Sida loo kiciyo habka mugdiga ee iOS 13
Haddii aad haysatid iPhone X, iPhone XS, iPhone XS Max, iPhone 11 Pro iyo iPhone 11 Pro Max, ka shaqeysiinta ama barnaamij u sameynta qaabkan waxay kuu oggolaaneysaa inaad keydiso qadar badan oo batari ah, ilaa iyo inta codsiyada aan adeegsano ay ku habboon yihiin qaabkan oo muuji xaalad mugdi ah oo run ah, oo midabka asalka gabi ahaanba madow yahay.
Laba ka mid ah codsiyada ugu isticmaalka badan, sida WhatsApp iyo Facebook, aad ku jeclaatay dalladda Mark Zuckerberg laguma taageeri karo qaabkan, hase yeeshe, Instagram haa waa iyo in ka yar toddobaad.
para daar qaabka mugdiga ee iOS 13Iyadoo aan loo eegin nooca iPhone ama iPad ee aad haysato, waa inaad fulisaa tallaabooyinka soo socda:
Marka hore, kor ayaan u kacnaa goobaha (giraangiraha qalabka lagu muujiyo shaashadda guriga ee iPhone-keena).
Marka xigta, dhagsii Shaashad iyo iftiin.
Xagga sare, macruufka 13 wuxuu noo ogolaanayaa inaan ogaano inaan rabno inaan isticmaalno nalka iftiinka ama mugdiga. Xuquuqda xigta, waxaan leenahay ikhtiyaarka ah si toos ah u dejiso hawlgalkeeda (iyada oo loo marayo jadwal ama Cad ilaa fiidka iyo mugdiga inta ay habeenka tahay).
Hawshani ma beddeleyso shaqada Habeenkii Shift, oo ah shaqeyn aan sidoo kale barnaamij ku diyaarin karno oo mas'uul ka ah hurdiga shaashadda si looga takhaluso midabada buluugga ah, sida lagu sheegay daraasado kala duwan, saameyn ku yeelata tayada hurdada, gaar ahaan haddii aan la kulanno saameynteeda daqiiqado ka hor intaadan seexan.
Sida loo kiciyo shaqada Night Shift ee iPhone / iPad
para dhaqaajiso shaqada Habeenkii Shift ama barnaamijka hawlgalkeeda, waxaan si toos ah uga samayn karnaa shaashadda iyo ikhtiyaarrada nalka qalabkeenna.
Waxaan marin u helnaa xulashooyinka qaabeynta ee iOS 13 (xaaladdan inkasta oo ay sidoo kale laga heli karo noocyadii hore) illaa goobaha.
Marka xigta, waxaan tagnaa ikhtiyaarka Wareejinta Habeenkii.
Daaqada hoose ee ka muuqata, waxaan ikhtiyaar u leenahay inaan ku hawlgalino howlaha shaqadan jadwal cayiman. Waxaan sidoo kale xaqiijin karnaa haddii aan rabno miiraha huruudka ah ee lagu mariyo shaashadda inuu noqdo ka daran ama ka daran.
Aalado la jaanqaadi kara shaqada Habeenkii Shift
Waxqabadka Habeenkii Shift wuxuu ka yimid gacanta iOS 9, wuxuuna la jaan qaadayaa dhammaan moodooyinka iPhone iyo iPad ee ay maamusho processor 64-bit ah, marka moodooyinka waawayn ee labada iPhone iyo iPad in waa la jaan qaadayaan shaqadan waa iPhone 5s, iPad Air iyo iPad mini 2.
Habka madow ama Habeenkii loo beddelo kee fiican?
Labadaba mugdi iyo shaqada Habeenkii Shift iyagu waa laba hawlood oo gebi ahaanba ka duwan sidaa darteed waa la buuxin karaa oo labada hawloodba si wada jir ah ayey u wada hawlgalaan. Sida ay sheegtay Anna Cox, oo ah borofisar wax ka dhigta Jaamacadda London College, ma jirto caddayn cilmi ah oo muujineysa in qaabka mugdiga ah uu yareeyo cirbadaha indhaha, oo ah wax sameeya Habeenkii Shiftka ama Habeenkii Iftiinka.
Habka mugdiga ahi wuxuu beddelayaa asalka cad ee madow, isagoo beddelaya qoraalka si loogu muujiyo caddaan, hase yeeshe, qoraalka dhalaalkiisa qoraalka lama dhimayo, markaa haddii marka aan shidno habka mugdiga ah, aynaan dhaqaajin habka Habeenkii Wareejinta, daalka muuqaalka ah ee naga horjoogsan doona in aan seexanno ayaa sii wadi doona inuu joogo.
IOS 13 waxay noo ogolaaneysaa inaan si wada jir ah u wada shaqeyno, inkasta oo aan kaliya u habeyn karno qaabka mugdiga ah si aan u dhaqaajino oo aan u shaqeyno iyadoo kuxiran hadday tahay maalin ama habeen. Si kastaba ha noqotee, waxqabadka Habeenkii Shift waa inuu barnaamijka hawlgeliyaa, dejiyaa waqtiga aan dooneyno inuu bilaabo inuu yareeyo heerka buluugga ah ee aan rabno inuu ku joogsado.
Waa maxay Tone True?
Hawl kale oo moodooyinka ugu dambeeyay ee iPhone sidoo kale na siinayaan waa shaqada TrueTone, oo ah mas'uul ka ah wax ka beddelka midabada ka muuqda shaashadda si loogu waafajiyo iftiinka jawiga xilligan iyo in markasta aamin sida ugu macquulsan ee xaqiiqda ah. Shaqadan kaliya lagama heli karo iPhone-ka, laakiin waxaan sidoo kale ka heli karnaa iPad-ka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 13 » Habka mugdiga ah ee iOS 13 miyuu badbaadiyaa nolosha batteriga? Haa iyo wax badan